Yommuu geessituu galmee Barreessaa keessaa AjajaCtrl-cuqaasi gootu, iyyaafataan saphaphuu kee teessoo saphaphuu gaafatameen banama. Yoo hantuutee hin fayyadamtu tahe, qaree keessa geessituu qubachiisiiti baafata halqaraa Shift+F10 tiin bani, achii Geessituu Bani fili.
Arfii eddoo sududaan arfii isa dhumaa hordofuun galchuun geessituu yoo dhiifte, OfiinSirreessaan yoo dandeessifame URL galtee akka barruu mul'ataa waliin wal fakkaatutti jijjiira.
Gosoota galmee hundaa keessaa, geessituu gulaaluuf qaaqicha Geessituu banuu ni dandeessa. Jalqaba qaree garakeessa geessituutti yookiin sududaan fuuldura geessituutti qindeessii, achii kabala Walta'inaa irraa sajoo Geessituu cuqaasi.
Title is: Geessitoota Gulaaluu